အင်တာနက်က Porn စွဲ၏ဖယ်ဘယ်သူမျှမကဇီဝဗေဒ Sense သည် (2012) ကို
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ anorexia နှင့်လိင်စွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံး-တည်ရှိပူးတွဲနိုင်ပါတယ်။
မကြာသေးမီကရေးသားခဲ့သောဒေါက်တာ Ley ကသူသည်အနည်းငယ်စိတ်ပူကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်သုတေသီများနှင့်သဘောတရားပညာရှင်တွေရဲ့လိင်စွဲကိုမှန်ကန်ကြောင်းကိုသဘောတူညီကြသည်။သူကနိုင်ငံရေးတွင်ကစားနေသည်ဟုထင်သော်လည်းညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်ကိုလေ့လာခြင်းမရှိသေးသောစွဲလမ်းနေသည့်သုတေသီများအဘယ်ကြောင့်ထိုသို့သောရဲရင့်စွာပြောဆိုမှုများကိုပြုလုပ်ရန်အကြောင်းပြချက်မရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်ဤစွဲ neurobiologists သိပ္ပံပေါ် မူတည်. နှင့်ပြူရီတန်၏အမြင်ကိုဝှကျထားကြသည်မဟုတ်။ ဒေါက်တာ Ley ရာပေါ်ဤအကြောင်းသုတေသီများအခြေခံဇီဝကမ္မအခြေခံမူလျစ်လျူရှုဆက်လက် သူတို့ရဲ့ကောက်ချက်အခြေခံ ကြောင်းလိင်စွဲလမ်းအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်သူသည်ဤအခြေခံသဘောတရားလျစ်လျူရှုသည်:
အလွဲသုံးစားမှု 1) မူးယစ်ဆေးဝါးသာပုံမှန်ဇီဝကမ္မယန္တရားများများကိုချဲ့ထွင်သို့မဟုတ်လျော့ကျသွားသည်။
ဒီအစွဲအဘို့အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာယန္တရားများပြီးသား (ရေသောက်သုံးခြင်း, အစာစားခြင်းမိတ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အချင်းချင်းဘွန်းမှ) ဦးနှောက်အတွင်းတည်ရှိနေသည်ဟုဆိုလိုသည်။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများရိုးရှင်းစွာသောဤယန္တရားများ hijack နှင့် ဆားကစ်။ ဒေါက်တာ Ley သီးခြား, စူးစမျးရှာဖှေရေးမပွုရသေးသောဦးနှောက် circuit ကိုလိင်သို့မဟုတ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုရန်ရှိကွောငျးအကြံပြုသလဲ?
2) တိကျသောလက္ခဏာနှင့်ရောဂါ၏တစ်ဦးကစုစည်းနောက်ခံရောဂါဗေဒအပြောင်းအလဲများကိုထောက်ပြ။ တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုပေးသောအခါ, ကခန္ဓာဗေဒနဲ့ဇီဝကမ္မမူမမှန်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်စုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြကြောင်းဖော်ပြသည်။ လက်တွေ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုဒီရိုးရှင်းတဲ့အယူအဆအပေါ်မှာအခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေအဓိကသတင်းစကားခဲ့ ASAM: အရိပ်လက္ခဏာ, ရောဂါလက္ခဏာနှင့်အပြုအမူ၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုဦးနှောက်ကိုပြောင်းလဲတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ထားကိုယ်စားပြုသည်။
အဆိုပါ "လေး C" စွဲအကဲဖြတ်ရန်တလမ်းတည်းနေသောခေါင်းစဉ်:
နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းရန် ထိန်းချုပ်ရေး အသုံး
ဆက်လက် ဆိုးရွားသောနေသော်လည်းကိုသုံးပါ အကျိုးဆက်များ
တောင်းပန် - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ / ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
မန်နီးဖက်စ်သည်ညစ်ညမ်းစွဲအဖြစ် Self-ခွဲခြားသတ်မှတ်တော်မူသောငါတို့၏ဖိုရမ်အပေါ်ယောက်ျား ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ သူတို့ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီး C လေးလုံးစလုံးစွဲလမ်းမှုပြတဲ့အခါ
ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူသည်သင်္ကေတများ၊ လက္ခဏာများနှင့်စွဲလမ်းမှုအပြုအမူများအားလုံးပါ ၀ င်သောဓာတုနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုရှိသူများအားလုံးတွင်အလားတူလက္ခဏာများနှင့်လက္ခဏာများကိုပြနေသော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲကိုမရရှိနိုင်ပါ။
ညစ်ညမ်းစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်ကိုစစ်ဆေးရန်မရှိသေးသည့်အငြင်းပွားမှု (လုံးဝမမှန်ပါဘူးဆရာ ၀ န်များအနေဖြင့်စွဲလမ်းမှုကိုဖော်ထုတ်ရန် ဦး နှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းမပြုပါ။ ထို့အပြင်အခြား ဦး နှောက်အခြေအနေများဖြစ်သောအယ်လ်ဇိုင်းမားနှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါကဲ့သို့သော ဦး နှောက်အခြေအနေများသည် ဦး နှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်း၏အကူအညီမပါဘဲရှာဖွေတွေ့ရှိရသည်။
3) အားလုံးစှဲထဲမှာတူညီတဲ့အဓိကပြောင်းလဲမှုများကိုပါဝင်ပတ်သက်နေ တူညီတဲ့အာရုံကြောလမ်းကြောင်း။ တှငျတှေ့အဓိကအပြောင်းအလဲများ အားလုံးစှဲပါဝင်သည်:
a) Desensitization: D2 receptors နှင့် dopamine အတွက်ကျဆင်းမှုပါဝငျသညျ။ ဒါဟာစှဲလမျးသူထွက်ခွာ, သဘာဝဆုလာဘ်အနေဖြင့်ဒီထက်ပျော်မွေ့ကြုံနေရအဖြစ်တငျပွ အပျော်အပါးမှလျော့နည်းထိခိုက်မခံတဲ့နှင့်အမျိုးမျိုးသော dopamine-raising လှုပ်ရှားမှုများ/တ္ထုများအတွက် "ဆာလောင်မွတ်သိပ်" ။
b) အသိ: တွေကိုသုံးပြီးနှင့်စွဲ-related တုံ့ပြန်သညျ့မွငျ့မား dopamine လွှတ်ပေးရန်မှဦးဆောင် Synaptic ဂီယာ၏အားကောင်း။
c) Hypofrontality: တစ်တိုကျရိုကျ cortex မီးခိုးရောင်ကိစ္စနှင့်ဇီဝြဖစ်အတွက်ကျဆင်းမှု, ဖြူသောအမှု derangement ပါဝငျသညျ။ အဆိုပါတိုကျရိုကျ cortex အမှုဆောင် function ကို၏ထိုင်ခုံ, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အကျိုးဆက်များကိုကြိုမြင်နိုင်ဖို့စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုအကျိုးကို circuitry အလွန်အကျွံဆွလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရောင်ပြန်ဟပ်။ ဒါဟာတစ်ချိန်ကဤပြောင်းလဲမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အဆိပ်သက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ရကြောင်းထင်ပေမယ့်သစ်ကိုသုတေသနပြုသူတို့မှာလည်းသူတို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်ပြသခဲ့သည် အစားအသောက်စွဲလမ်း, လောင်းကစားစွဲနှင့်ဟုတ်တယ်, အင်တာနက်စွဲ.
အားလုံးသုတေသနလုပ်ငန်း အကယ်. တဦးတည်းဦးတည်အချက်များဒါကြောင့်အပြုအမူတွေရဲ့ဝိသေသတစ်ခုထား၏အခြားအကြောင်းရင်းရှာယုတ္တိမတန်ဖြစ်ပါတယ်။ (အဘယ်သူ၏အဖွဲ့ဝင်ကမ္ဘာပေါ်မှာထိပ်တန်းစွဲသုတေသီများအချို့တို့ပါဝင်သည်) ASAM, အထူးလေးနက်စွာဖော်ပြထားသည်ဘာဖြစ်လို့ဒီ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-အပြုအမူစှဲတည်ရှိ.
self-ဖော်ထုတ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူအပေါငျးတို့သဆိုင်းဘုတ်များ, ရောဂါလက္ခဏာတွေအပေါင်းတို့နှင့်စှဲဖို့ဘုံအပြုအမူတွေရှိပါတယ်ဆိုပါကဖြစ်နိုင်သမျှဘယ်အရာကိုဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုလက္ခဏာတွေဒီစုဆောင်းမှုဖြစ်စေတဲ့နေကြသည်: ဒေါက်တာ Ley များအတွက်သိသာမေးခွန်းတစ်ခုကိုဤသူကား (စွဲစမ်းသပ် ) ယားအားဖြင့်
ထိုအခါက porn သို့မဟုတ်လိင်စွဲစိုးမိုးရေးရန်တဦးတည်းသာချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုရှင်းပြပါ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Anorexia နှင့် Hypersexuality Co-တည်ဆဲ?
ဒေါက်တာ Ley: လိင်စွဲလမ်းမှုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုလျှံမှုသာမကလိင်ဆိုင်ရာ anorexia ဟူ၍လည်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုရှိနေခြင်းနှင့်၎င်းမရှိခြင်းနှစ်ခုလုံးကိုဖုံးအုပ်ထားသောရောဂါတစ်ခုကိုသင်မည်သို့ငြင်းဆိုသို့မဟုတ်ငြင်းဆိုနိုင်သနည်း။
ဤမေးခွန်းသည်အခြေခံစွဲချက်ရှိသော neurobiology ကိုနားမလည်ခြင်းဖြစ်သည်။ အသည်းအသန်အဝလွန်နေသည့်အစားအစာစွဲလမ်းသူသည်ဆလရီတုတ်များကိုအဘယ်ကြောင့်မစောင့်ရှောက်ရကြောင်းမေးမြန်းခြင်းနှင့်သို့မဟုတ်ကိုကင်းစွဲလမ်းသူသည်ဥယျာဉ်အတွင်းရှိပျင်းရိသည့်လမ်းလျှောက်မှုများကိုအဘယ်ကြောင့်မွေ့လျော်နေကြောင်းမေးမြန်းခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
အဖြေ: ထိခိုက်စေ desensitization နှစ်ဦးစလုံးဟာညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူ၏ဦးနှောက်အတွက်အလုပ်ဖြစ်ကြသည်။
ငါဒေါက်တာ Ley ယင်းကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ထင် အီတလီ Andrology ၏လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာအားဖြင့်စစ်တမ်းမဟုတ်ရင်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောယောက်ျားများတွင် copulatory impotence နှင့် "sex anorexia" ကိုတွေ့ရှိခဲ့သော။ ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာ ၀ န်ကပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ porn-သွေးဆောင် EDသို့သော်လည်း, porn အသုံးပြုမှုကိုရှောင်မှတဆင့်ရပြန်လေ၏။
ငါထင်သည်မှာ Ley သည်သူ၏ hypersexuality မေးခွန်း၏ထက်ဝက်သည်ဆိုးကျိုးများ (ဥပမာ copulatory ED) များကြားမှယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေမည်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါ ာင်း အလုပ်မှာ။
အသိ အရာအတွက်စွဲဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအပြောင်းအလဲသို့မဟုတ်စွဲလမ်း-related တွေကိုကပါဝင်ပတ်သက်သည်အခြားဆုလာဘ်ထက် ပို. အကျိုးကို circuitry လှုံ့ဆော်ခြင်း။ ဤသည်မတရားသောများအတွက်အခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်လေ့လာမှုများထုတ်ဖေါ် ကြောင်း (အက်ကြောင်းပိုက်ကိုမြင်လျှင်) တွေကိုမူးယစ်ဆေးဝါးများသောက်သုံးသကဲ့သို့အများကြီး dopamine တက်ထှကျနိုငျသညျ။ အင်တာနက် porn စွဲလမ်းသူများစွာနှင့်အတူအထိခိုက်မခံသောလမ်းကြောင်းများသည်အမှန်တကယ်မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအပါအဝင်အခြားသောသဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများထက်ညစ်ညမ်းမှုများကိုတုန့်ပြန်ခြင်းသည်အလျင်အမြန်ပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်။ ဒါဟာတကယ်တော့ hypersexuality မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါစွဲလမ်းမှုပါ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်လိင်မဟုတ်ပါ ၎င်းတွင် 2-D ဖန်သားပြင်များနှင့်လျင်မြန်သောမီးအသစ်အဆန်းရှိသည် အစစ်အမှန်လိင်နှင့် ဆက်စပ်. မျှ တစ်ဖက်အတူ။
ညီမျှခြင်း၏ "anorexia" တစ်ဝက်အစစ်အမှန်ဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များအတွက်စိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နိုင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါ desensitization အလုပ်မှာ။
စွဲအခြေခံ dopamine sensitivity ကိုတစ်ဦးကျဆင်းမှုနှင့်တစ်ဦးကျောခိုင်းထားသော dopamine တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေ အခြား သဘာဝကဆုလာဘ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ desensitization တစ်ဦး numbed အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်။ Dopamine စိတ်လှုပ်ရှားနောက်ကွယ်မှ, ဒါပေမယ့်လည်းလိင်စိတ်နဲ့စိုက်ထူနောက်ကွယ်မှဖြစ်ပါတယ်။ (ကထုံအပျြောအပါးတုံ့ပြန်မှုအားလုံးအဓိကစှဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတားစီးအဘယ်ကြောင့်တဦးတည်းအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါသည်။ ) တစ်ဦးညစ်ညမ်းစွဲတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှအနိမ့်နှင့်အနိမ့်အခြေခံ dopamine ကခက်ခဲအစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်များအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားရစေ။
အသိ အင်တာနက်က porn မှပုံမှန် dopamine တုံ့ပြန်မှုထက် = အဆင့်မြင့်
Desensitization လိင်အပါအဝင်သဘာဝကဆုလာဘ်မှ = အများကြီးနိမ့် dopamine တုံ့ပြန်မှု
စှဲမွဲမှု = ရှာ dopamine
"ကိုကြည့်ပါအဘယ်ကြောင့်ငါတစ်ဦးကအဖော်သန်း Porn ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကိုရှာပါသလား?sensitization နှင့် desensitization အကြားခြားနား၏တစ် ဦး ထက်ပိုသောပြည့်စုံဆွေးနွေးမှုအတွက် "။